Nagarik News - उजुरी दिने समय थप
17 Jun 2016 | 07:52am
दुर्गा दुलाल/चाँदनी हमाल
उजुरी दर्ता गराउन बिहीबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुगेका नेपाली कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्वज चन्दलगायत। तस्बिर : विजय गजमेर
दुवै आयोगले असार मसान्तसम्म उजुरी दिन सक्नेगरी समय बढाएका हुन्। यसअघि उजुरी दिने समयसीमा जेठ मसान्तसम्म तोकिएको थियो। वैशाखदेखि उजुरी लिन थालेका आयोगले पहिलोपटक दुई महिनाको समय दिएका थिए। सम्पूर्ण पीडितको उजुरी आइनसकेको देखिएकाले एक महिना लम्ब्याउने निर्णय गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विष्णु पाठकले जानकारी दिए।
'आयोगमा पछिल्ला दिन उजुरी दिने क्रम तीव्र रहेको र पीडितले नै समय थप गरिदिन आग्रह गरेकाले एक महिना समय थप गरिएको हो,' प्रवक्ता पाठकले भने, 'प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु हुने भएकाले र नियमावलीमा अनुसन्धानका लागि ६ महिना हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले थप गरिएको हो।' नियमावलीमा आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ महिनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिने भनिएको छ। सत्यनिरुपण आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल र बेपत्ता आयोगको पुल्चोकमा उजुरी दिन सकिने गरी म्याद थप गरिएको हो। उजुरी खामबन्दी वा मौखिक रूपमा समेत गर्न सकिनेछ।
यसअघि परेको उजुरीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गर्ने तयारी पनि दुवै आयोगले गरेका छन्। सत्यनिरुपण आयोगले केही दिनभित्रै अनुसन्धानसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी काम थाल्ने तयारी गरेको सदस्य माधवी भट्टले बताइन्। पछिल्ला दिन पीडितको लर्को लागेकाले पनि एक महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिइन्। दुई महिनाको अवधिमा सत्यनिरुपण आयोगमा ३३ हजार ५ सय ९० थान र बेपत्ता आयोगमा २ हजार ४ सय थान उजुरी दर्ता भएको छ। सरकारले करिब १७ सय मानिस बेपत्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको भए पनि उक्त त्यसभन्दा करिब ४ सय धेरै पीडितले उजुरी दिइसकेका छन्। मेलमिलाप आयोगमा पनि शान्ति मन्त्रालयको तथ्याकभन्दा धेरै उजुरी परेको छ। एक महिनाको अवधि थप भएकाले अझ बढ्ने दुवै आयोगको दाबी छ।
कांग्रेस नेताको उजुरी
सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा तत्कालीन माओवादीले घरजग्गा कब्जा गरेर फिर्ता नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङ र विनयध्वज चन्दले बिहीबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
झापाको बुधबारेस्थित गुरुङको घर, सम्पत्तिसहित ३ सय रोपनी जग्गा माओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको थियो। 'वर्षभरिको मिहिनेतले पाकेको धान थन्क्याएर काठमाडौं आएँ, घरमा बहिनी बस्थी,' गुरुङले भने, 'त्यहीबेला एक हुल माओवादीले लुटेर लगे। एकपटक हैन, पटक–पटक आएर लुटे। बहिनीले भागेर ज्यान बचाई। अनि त घर–जग्गा सर्वस्व उनीहरूकै कब्जामा पर्यो ।'
त्यसपछि घर नफिरेका वृद्ध गुरुङ बिहीबार लावालस्करसहित आयोगमा उजुरी दिन पुगे। आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित पदाधिकारीसँग भेट गरी आफ्नो पीडा पोखे। 'नियमको समय कसैले काट्न हुन्न भनेर हामी आज उजुरी दर्ता गराउन आएका हौं,' उनले आयोग पदाधिकारीसामु बोले, 'तर मैले फलानालाई मारेको हुँ, सक्छौ भने पक्राउ गर भन्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न? नेपालको कानुनले के भन्छ?' अध्यक्ष मौन रहे। केही बेरको मौनतापछि छेउमै रहेका अर्का पदाधिकारी बोले, 'कानुनी प्रक्रियामा त अगाडि जानुपर्छ।' नेता गुरुङले थपे, 'हो यस्तै खालको धम्की अझै पनि ठामठाममा आउने गरेको छ।'
'मेरो सम्पत्ति लुटे, बाँडे, बेचेर खाए,' उनले भने, 'बाँड्ने मान्छे पनि मलाई थाहा छ, टाकटुक पारेर हिँडे, जसको नाममा म उजुरी दिँदैछु, त्यो मान्छे यहाँ होइन विदेशमा छ।' उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको समेत कार्यान्वयन नभएको बताए। लुटेर खान पाइँदैन, लुटिएको छ भनेे फर्काउनुपर्छ भन्ने आदेश गरे पनि अझै आफूजस्ता कयौंले सम्पत्ति फिर्ता नपाएको दुखेसो उनले पोखे। गुरुङलाई साथ दिँदै बर्दियाका कांग्रेस नेता विनयध्वज चन्दले पनि कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनेर ठूलै डंका कसे पनि त्यो राजनीतिकरण मात्र भएको उल्लेख गरे।
'कब्जा जग्गा मेरैबाट फिर्ता गर्ने भनेर प्रचण्डजी आफैँ जानुभो, हाम्रा सिटौला (कृष्ण) जी पनि जानुभो,' चन्दले भने, 'तर बिहान फिर्ता गरेको जग्गा बेलुकै कब्जा भो, त्यो कस्तो खालको फिर्ता हो?'
गुलरियामा आफूजस्ता धेरैजनाको जग्गा अझै पनि फिर्ता नगरिएको उनले बताए। विनयध्वज चन्दबाट जग्गा फिर्ता सुरु भयो, अन्त पनि त्यही भयो। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज नामक संस्थाका चन्द महासचिव हुन् भने गुरुङ अध्यक्ष हुन्। शान्तिप्रक्रिया अझै नटुंगिएको भन्दै गुरुङले भने, 'तैपनि आशा छ, यहाँबाट न्याय पाउँछौं।' द्वन्द्वका समयमा आदेश दिने र कार्यान्वयन गराउने पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नन्दबहादुर पुनलगायत नेतासहित स्थानीयस्तरका नेताको नाम उनीहरूले उजुरीमा किटान गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई अझै सुरक्षा नभएको भन्ने गुनासोबारे भने आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जवाफ दिए। 'जहाँ–जहाँ हामी पुग्यौं, हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएका छौं,' उनले भने, 'अझै पनि त्यस्तो छ भने हामीलाई खबर गर्दा हुन्छ।' अहिलेसम्म उजुरी आउने क्रम बढेको भन्दै दाङबाट भने एउटाभन्दा बढी उजुरी नपरेको जानकारी उनले दिए। आयोगको प्रचार कम भएको स्वीकार गर्दै उनले म्याद बढाउन माग बढेको जनाए। कांग्रेस नेताको समूहले पनि म्याद कम भएकाले कम्तीमा तीन महिना बढाउन आग्रह गरे। आफूहरुको निवेदन हेर्दै नहेरी फालिने हो कि भन्ने आशंका मेट्दै आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले भनिन्, 'त्यसरी पीडितले दिएका उजुरी टोकरीमा फाल्न सक्दैनौं, घटनामा आदेश दिने र आदेश पालना गर्नेको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं।'
आफन्त गुमाउँदाको पीडा
२०५८ साल जेठ १६ गते बाबु मारिँदा उनी ५ वर्षका थिए। एक भाइ र बैनी आमाको काखमा खेल्दै थिए। बाबु मारिएको चार वर्षपछि आमाले अर्को बिहे गरिन्। ९ वर्षका उनीमाथि भाइबहिनीको जिम्मेवारी थपियो।
अहिले उनी २० वर्षका भए। इन्जिनियरिङ पढ्दैछन्। १५ वर्षपछि बाबुको हत्याको कारण जान्न उनी सत्यनिरुपण आयोगको दैलोसम्म पुगेका छन्। 'मेरो बुबालाई प्रहरी खोरमा टुक्रा–टुक्रा पारेर, खुर्सानी छर्केर मारे,' हुम्ला सर्किदे– ६ का जटिल कार्कीले गाउँलेेबाट सुनेका कुरा आयोग पदाधिकारीलाई बताए, 'साँच्चिकै त्यस्तै भयो कि के, मेरा बुवालाई कसरी मारियो, जान्न चाहन्छु।'
उनी त्यसरी निमर्मतापूर्वक हत्या गर्नेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको हेर्न चाहन्छन्। 'बुवाको हातमा चोट थियो, त्यही उपचार गराउन नेपालगन्ज जँादा बाटैबाट प्रहरीले कुसुमचौकी लगेर थुने,' उनी गाउँलेले भनेको सुनाउँछन्, 'त्यहीं मारे। लाससमेत परिवारलाई दिएनन्,' उनले नागरिकसँग भने।
अहिलेसम्म कतै नपोखिएको उनको पीडा बिहीबार आयोगको उजुरीमा छताछुल्ल पारे। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री श्रीकान्त रेग्मी र प्रहरीका एआइजी प्रदीपसमशेर जबराको नाम किटेरै उनले उजुरी दर्ता गराएका छन्।
लमजुङ, धमिलीकुवा– २ की सावित्री चिलवालले पति गुमाएको १३ वर्ष भयो। लमजुङबाट खेदो गर्दै राजधानीकै मुटुमा २०६० फागुन ३ गते गोली ठोकेर उनका पति गणेश चिलुवाललाई माओवादी कार्यकर्ताले मारेका थिए। वडाध्यक्षसमेत रहेका गणेशलाई गाउँमै पनि मरणासन्न हुनेगरी खुकुरीले प्रहार गरे। 'घरबाटै थुतेर मकैबारीमा लगी खुकुरी हानेका थिए,' सावित्री आँशु पुछ्दै बोल्छिन्, 'पानी पानी भन्नुभयो, त्यसपछि तेरो लोग्ने मर्योम भनेर हिँडे।'
काठमाडौंमा उपचारपछि माओवादी प्रतिकार समूह गठन गरेका उनलाई फागुन १ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुला जलाएको भोलिपल्टै कार्यालयमा गोली हानिएको थियो। माओवादीका तत्कालीन उपत्यका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापासहित तीनजनाले हत्या गरेको भन्दै उनले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकी छन्। 'घर फर्किन अझै सक्दिन, यहाँ त न्याय पाइन्छ कि,' सावित्री आशाको त्यान्द्रो समात्दै भनिन्, 'अहिलेसम्म कतै उजुरी नगरी यहाँ आएकी छु।'
सिन्धुपाल्चोकका सूर्यबहादुर लामाले पत्नी फूलमाया लामालाई गुमाउँदाको कहालिलाग्दो क्षण अझै बिर्सेका छैनन्। २०६१ जेठ ४ गते। 'राति सुतिरहेका ठाउँमा हाम्लाई सहयोग गर्न हिँड् भनेर माओवादीले लगे,' लामा स्मरण गर्छन्, 'जिरी जाने रोडमा पुर्यातएर तुलबम झुन्ड्याउन लगाए।' जानी–नजानी तुलबम टाँग्दै थिए। 'मैले त जानिन, उनले के जान्थिन्, थिच्न नहुने ठाउँमा थिचिएछ, बम पड्क्यो,' लामाले भने, 'उनी बमको छर्रासँगै भुइँमा पछारिइन्।' त्यसपछि कहिल्यै उठिनन्।
पत्नी वियोगमा परेका उनले सात सन्तान एक्लै हुर्काए। छोराछोरीकै कारण उतिबेला कसैसँग यो पीडा भन्न सकेनन् तर उजुरीमा खुलेका छन्। स्थानीय नेता लाक्पा तामाङसहितको नामै किटेर उनले न्यायको आशा पोखेका छन्।